सहकारीले पार्टी र पार्टीले सहकारी चलाएका छन् - Karobar National Economic Daily
सहकारीले पार्टी र पार्टीले सहकारी चलाएका छन्
query_builderApril 18, 2017 11:47 AM supervisor_accountकारोबार संवाददाता visibility1988
गौरीबहादुर कार्की पूर्वन्यायाधीश, विशेष अदालत
सहकारीमा देखिएका समस्या सम्बोधन गर्नका लागि भन्दै सरकारले अघि सारेको सहकारी विधेयक व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा छ । तर, विधेयकका व्यवस्थाहरूमा राजनीतिक दल र सांसदहरूको विचार नमिल्दा अघि बढ्न ढिलाइ भइरहेको छ ।
सांसदहरूका स्वार्थका कारण सहकारी सिद्धान्त, मूल्य–मान्यताविपरीत हुने गरी संशोधन प्रस्ताव परेको बताउँछन् ‘समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोग’ संयोजकसमेत रहेका पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की ।
करिब २५ वर्ष न्याय र १० वर्ष प्रशासनिक क्षेत्रमा बिताएका कार्कीले २०७० सालमा गठित आयोगमार्फत सहकारीको अध्ययन गरी सरकारलाई विभिन्न सुझाव दिएका थिए । समस्याग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन आयोग गठन गर्नुका साथै कानुन संशोधन गरी नियमन र दण्ड–सजायको व्यवस्था कडा बनाउन ऐनको मस्यौदासमेत सरकारलाई बुझाएका थिए ।
सहकारीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकारले तत्कालै ऐन ल्याउन सुझाव दिए पनि लामो समयसम्म आउन नसक्दा धेरै सहकारीपीडितहरूको बिचल्ली भएको उनले बताए । छलफलका क्रममा रहेको सहकारी विधेयकमा भएको विवाद र सहकारीको अवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले कार्कीसँग गरेको कुराकानी :
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गरी तपाईं संयोजक रहेको समितिले सकारलाई सुझाव बुझाएको पनि तीन वर्ष हुन लागिसक्यो । सहकारीमा सुधारका कार्यक्रम तत्कालै सुरु गर्न सुझाव दिए पनि सरकार उदासीन देख्दा कस्तो लाग्छ ?
हामीले २०७१ साल जेठमा तत्कालीन गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई प्रतिवेदन बुझाएका हौं, जसमा सहकारीमा धेरै समस्या रहेको र यसमा सरकारले तत्कालै सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिएका छौं ।
हाम्रो आयोगमा विभिन्न सहकारीमा १२ हजार व्यक्तिको ११ अर्ब रुपैयाँ फसेको उजुरी आयो । त्यसबेला हामीले अध्ययन गरेका सहकारीमध्ये एकथरी व्यक्तिले ठगीकै नियत राखेर सहकारी खोलेको देखियो । अर्काथरीले चलाउन ढंग नपु¥याउँदा पनि समस्या भएको देखियो भने अर्काेथरीले जथाभावी चलाएको देखियो ।
यसमध्ये बचत तथा ऋण सहकारी बढी समस्यामा परेका देखियो । सहरी क्षेत्रका सहकारीमा बढी समस्या देखियो । गाउँका र अन्य विषयगत सहकारीहरूमा भने समस्या कम देखियो ।
हामीले सरकारलाई सुझाव बुझाउँदा समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न तत्कालैका लागि ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति’ गठन गर्ने र सोहीमार्फत समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति खोजबिन, व्यवस्थापन, बिक्री–वितरण गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिएका थियौं ।
यसै गरी सहकारी ऐन–२०४८ धेरै पुरानो भएको र यसले अहिलेका समस्या सम्बोधन गर्दैन, बरु बढ्छ भनेर भविष्यमा समस्या नदोहोरियोस् भन्नका लागि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दियौं । त्यसका लागि नयाँ सहकारी ऐनको मस्यौदा पनि बनाएर दियौं । ऐनमा नियमनको व्यवस्था, कानुनी कारबाहीको दण्ड–सजायको व्यवस्था कडा प्रस्ताव गरिएको थियो ।
यसैगरी सहकारीमा भएको बदमासीलाई चाँडो कानुनी दायरामा ल्याउन सकियोस् भनेर साधारण अदालतभन्दा छिटो काम गर्न सहकारी न्यायाधिकरणको पनि कानुनी मस्यौदा बनाएर दियौं । हाम्रो आयोग गठन गर्दा सहकारीमा पैसा राखेर डुबेका व्यक्तिहरू कहिले विभाग, कहिले मन्त्रालय धाएर आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
बढी ब्याजको लोभमा पैसा राखेका सर्वसाधारणहरू दैनिक गुजारा र औषधी–उपचार गर्न पनि पैसा नभएको अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा प्रतिवेदनको सुझाव तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने हो । तर, सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू यो समस्यामा गम्भीर नभएको लाग्छ ।
हामीले प्रतिवेदन बुझाउन सहकारी मन्त्रीको समय मिलाउन तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याललाई भेटेर समस्या सुनायौं । उहाँले छिटो पेस गर्नुहोस्, अध्यादेश ल्याएर भए पनि सहकारीको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्नुभयो । तर, प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग समय नै पाएनौं । बल्ल–बल्ल समय पाएर प्रतिवेदन बुझायौं ।
उहाँले पनि छिटो कार्यान्वयन गर्न मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिनुभयो । त्यसपछि प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन नगराउन, यसलाई ढिलो गराउन मन्त्रीहरूकै चलखेल भयो भन्ने सुनियो । बल्लबल्ल एक वर्षपछि ०७१ चैतमा अध्यादेश जारी भयो । तर, ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्नेमा वास्ता गरिएन । सहकारी नेताहरूको पहुँचका कारण यसलाई फेल गराउन काम भयो ।
ढिलै भए पनि नयाँ ऐनको मस्यौदा संसद् छलफलका क्रममा छ । यसले तपाईंहरूको सुझाव समेटेको छ त ?
चित्रबहादुर केसी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएपछि सहकारी ऐन अघि बढेको हो, जसमा हामीले दिएका धेरै सुझाव समेटिएको थियो । तर, संसद्मा धेरैजसो माननीय आफैं सहकारीकर्मी रहेकाले विधेयक विवादित भएको छ ।
विधेयकमा प्रस्तावनादेखि विभिन्न धारामा माननीयहरूको ६९४ संशोधन परेको छ । देशकै मुल कानुन संविधान बनाउँदा त निष्क्रिय देखिएका माननीयहरू सहकारीको कानुनमा यति धेरै सक्रियता र चासो देखाएका छन् । यसबाट पनि थाहा हुन्छ, उहाँहरूको कति धेरै स्वार्थ छ । स्वार्थ रहेकाले नै धेरै संशोधन परेको हो ।
माननीयहरूले पेस गरेको संशोधनलाई विश्लेषण गर्दा अधिकांश सहकारीको नियमन र दण्ड–सजायको व्यवस्था फितलो र बनाउने नियतले आएको छ । सहकारीको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्तविपरीत हुने गरी समुदायकेन्द्रित, सदस्यकेन्द्रित हुनुपर्ने कुरा पनि हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव आएका छन् ।
विधेयकमा सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र बढीमा एक जिल्लासम्म रहने व्यवस्था गरिएको छ । सहकारी संस्थाले कार्यक्षेत्र धेरै लिने, विभिन्न जिल्लामा सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तथा पैसा उठाउने गरेर ठगी गरेको पाइन्छ ।
सहकारी भनेको प्रतिबद्ध व्यक्ति मिलेर काम गर्ने हो, जसको साधारणसभाबाट सञ्चालक समिति गठन हुन्छ र साधारणसभामा सदस्यहरूले दिएको त्यही म्यान्डेडअनुसार संस्था चल्नुपर्छ, जसका लागि सहकारी संस्था समुदाय र सदस्यकेन्द्रित हुनुपर्छ । सदस्यहरू शक्तिशाली हुनुपर्छ तर सांसदहरूले सदस्यलाई भन्दा सञ्चालक समितिलाई बलियो बनाउने गरी संशोधन हाल्नुभएको छ । कार्यक्षेत्रलाई देशभर दिनुपर्ने संशोधन परेको छ ।
तपाईंहरूले सहकारी कसुरमा २० वर्षसम्म कैद हुने सुझाव दिनुभयो, आर्थिक अपराधमा ज्यान मुद्दासरह सजाय तोकियो भनेर विरोध भयो नि ?
सजाय भनेको कसुरको मात्राअनुसार हुन्छ । १–२ लाख र करोडै हिनामीनालाई एकै मान्नु हुँदैन । जानी–बुझीकन गर्ने र भवितव्य हुने घटनाहरूमा पनि कसुरको मात्राअनुसार सजाय तोकिएको हुन्छ । त्यसैले हामीले पनि कसुरको मात्राअनुसार अधिकतम २० वर्षसम्म सजायको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका हौं । यसलाई मन्त्रालयले १० वर्षमा झार्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, सांसदहरूले अझै दण्ड–जरिवाना फितलो बनाउनुपर्छ भनेर लाग्नुभएको छ । ऐन कडा हुँदा सहकारी अभियानकर्ताको किन टाउको दुख्नुप¥यो । राम्रो काम गर्नेलाई त सरकारले अनुदान दिने, प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था छ नै । यसको मुख्य कारण भनेको यो भोलि आफूले पनि बदमासी गर्दा फसिएला भनेर दण्ड–सजायका व्यवस्था फितलो बनाउन खोजिएको हो । उहाँहरूको डर र सन्त्रास हो ।
सहकारीमा कार्यकारी बस्न नपाउने व्यवस्था गर्नुको कारण के हो ?
संस्थामा साधारणसभाबाट चुनिएर आउने सञ्चालक समितिले नीति बनाउने र निर्देशन दिने हो । कर्मचारी व्यवस्थापनले उक्त नीति र निर्देशनअनुसार काम गर्नुपर्छ । यो व्यवस्थाले संस्थालाई चेक एन्ड ब्यालेन्समा राख्ने काम गर्छ । तर, हामीकहाँ एउटै व्यक्ति सञ्चालक÷अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी बसेर हालीमुहाली गरिरहेको अवस्था छ । नाम मात्रको सदस्य बनाएर बचत उठाउने, त्यसलाई जथाभावी आफूखुसी लगानी गर्ने, पारिवारिक सदस्य मिलेर सहकारी चलाउने काम भइरहेको छ । यस्तो गलत प्रवृत्ति रोक्नका लागि कार्यकारी बस्न नपाउने प्रस्ताव गरेका हौं । उक्त प्रस्ताव विधेयकमा पनि समेटिएको छ । तर, यसलाई हटाउनुपर्छ भनेर सांसदको संशोधन पर्नु दुःखद हो ।
स्रोत नखुलेको कालो धन लुकाउन पनि सहकारीको प्रयोग भएको आरोप लाग्दै आएको छ । सहकारीको कारोबारको सीमा तोक्नु आवश्यक छ कि छैन ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष अनुगमन पनि छ । स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण भ्रष्टाचारबाट कमाएको, कालो धन सहकारीमा आएको हुन सक्छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सहकारीको कारोबारमा सीमा तोक्नु आवश्यक छ । यतिभन्दा बढी कारोबार गर्नेले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जानुपर्छ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सहकारीले पनि वाणिज्य बैंकहरूकै जस्तो कारोबार गर्ने हो भने सहकारीको मर्म कहाँ बाँकी रह्यो र ?
अहिले बचत तथा ऋण सहकारीहरूले सर्वसाधारणबाट पैसा उठाउने र बढी फाइदा हुने क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरेका छन् । उनीहरूले घरजग्गा, सेयर, गाडीका साथै विभिन्न कम्पनीमा पनि लगानी गरेका छन् । हिजो राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई घरजग्गा लगानीमा सीमा तोक्दा सहकारी क्षेत्रमा पनि यत्रो समस्या देखियो ।
अहिले पनि सहकारीको कार्यशैली त्यही अवस्थामै छ । विकसित देशहरूमा सहकारी क्षेत्रले देशमा राष्ट्रिय उत्पादनमा यति योगदान ग-यो भनेर चर्चा गरिन्छ । तर, हामीकहाँ सहकारीमा यति रकम छ भन्ने मात्र हो । सहकारीमार्फत भएका उत्पादन एकदमै न्यून छ । राष्ट्रिय रूपमा सहकारीको योगदान छैन भने पनि हुन्छ ।
यो अवस्थामा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन र कारबाही आवश्यक छ । नियमनले राम्रो काम गर्ने सहकारीलाई कुनै असर गर्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब विभिन्न ऐन जारी भएका छन् । अहिले सहकारी क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित नगर्ने हो, सहकारीका सिद्धान्तविपरित हुने गरी ऐन जारी गर्ने हो भने नेपाललाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आउन सक्छ ।
सांसदहरू सहकारीको कार्यक्षेत्र र कारोबार खुला हुनुपर्छ भनेर अनुगमन र दण्ड–सजायको व्यवस्था पनि लचिलो बनाउन लबिङ गरिरहनुभएको छ । सहकारी डुबाउनेलाई कारबाही हुँदा राम्रो काम गर्नेलाई के असर ? सहकारीको मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त त्याग्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको सहकारी बदनाम हुन्छ । यसतर्फ सांसदहरू सचेत हुन जरुरी छ ।
संवैधानिक पददेखि शिक्षक/कर्मचारी सहकारीको सञ्चालक बस्न नपाउने प्रस्ताव गर्नुको कारण के हो ?
राष्ट्रसेवक राज्यको कोषबाट तलबभत्ता खानेहरू अरू संस्थामा सञ्चालक हुन मिल्दैन । यसलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनले पनि रोक लगाएको छ भने पेसागत आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । सांसद सहकारीको सञ्चालक हुँदा स्वार्थको प्रभाव पर्छ । यसको अर्को पाटो भनेको एउटै व्यक्ति धेरै संस्थामा बस्दा काम पनि प्रभावकारी हुँदैन ।
अहिले पनि अनुगमनका लागि सहकारी विभाग छ । यसको काम प्रभावकारी नहुनुको कारण के हो ?
०४८ सालपछि नेपालमा च्याउसरि सहकारी खुले । पत्रपत्रिकामा आकर्षक ब्याजदरको प्रलोभन देखाएर पैसा जम्मा पारे । त्यो पैसा कसरी कहाँ लगानी भयो भनेर कसैले अनुगमन गरेन, जसका कारण सीमित व्यक्तिले जथाभावी लगानी गरे ।
घरजग्गा कारोबार, हाउजिङ, बस एयरलाइन्सलगायतका कम्पनीमा लगानी भयो । सहकारीमा बचत गर्ने सर्वसाधारणले पनि केही हेरेनन् । सहकारी विभाग र डिभिजन कार्यालयको काम पनि प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
सहकारी विभागले काम नगर्नु भनेको सरकारले नगर्नु हो । सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई त्यति गम्भीर रूपमा लिएन । सहकारी विभाग कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको तर कृषिमन्त्रीको ध्यान सहकारीमा नहुँदा स्वामित्व लिने पनि कोही भएन, जसका कारण सहकारी विभागका हाकिमहरूमा पनि जागिर खाने, विदेश घुम्ने मात्र मानसिकता भयो ।
भएका अनुगमन पनि प्रभावकारी नभएको देखियो । डिभिजन कार्यालयहरूले सहकारीको अनुगमन गर्न जानुअघि नै हामी आउँदै छौ भनेर जानकारी दिने, त्यसपछि सहकारवालाले राम्रा फाइलहरू मिलाएर देखाइदिने, टन्न खानपिन गराएर खामभरि पैसा दिने गर्दा रहेछन् ।
यसैगरी दसैंमा पनि पैसा लिने रहेछन् । यो प्रवृत्तिले सहकारी ठीक छ भन्नेबाहेक प्रतिवेदन आएन । एउटा कर्मचारीको निरीक्षणपछि त्यसमा रजिस्टारले छड्के गरेनन् । नेपाली संस्कारअनुसार सबैले आफ्नो पेट भर्ने मात्र काम गरे, जसका कारण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
लेखापरीक्षकको पनि कमजोरी छ नि ?
लेखापरीक्षकले पनि आर्थिक प्रलोभनमा ठीक छ भनेर प्रतिवेदन दिने गरेको पाइन्छ । हामीकहाँ गलत काम गर्ने अडिटरमाथि कारबाही गर्दा उनीहरूकै संस्थाले बदमासीलाई जोगाउने समेत काम गरेको पाइन्छ । पैसा खाएर मिलेर काम गर्ने चलन छ । त्यसलाई क्रस चेक, स्याम्पल टेस्ट गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था छैन ।
सहकारी सदस्यको नियमनमा चल्ने संस्था हुन् । सहकारीमा कारोबार गर्ने सदस्यहरू आफ्नो भूमिकाप्रति कत्तिको जागरूक छन् त ?
गाउँतिर स–सानो कार्यक्षेत्र लिएको, समुदायमा आधारित र उत्पादनमूलक सहकारीहरू राम्रा छन् । उनीहरूको कार्यक्षेत्र पनि सीमित छ, सदस्यहरूमा पनि एक–अर्काले चिनेका छन् । उनीहरू आफ्नो भूमिकाप्रति सचेत छन् । तर, सहरी क्षेत्रका बचत तथा ऋण सहकारीमा भने वाणिज्य बैंकभन्दा बढी ब्याज पाउने भएकाले मात्र सर्वसाधारण गएका हुन् । संस्था त अध्यक्ष वा केही व्यक्तिले मात्र चलाएको छ ।
सदस्यलाई के छ, कहाँ छ, कसरी चलेको छ भन्ने थाहै छैन । सरकारले सहकारी शिक्षा, जनचेतना दिन पनि सकेको छैन । यही कारण पनि जनता ठगिएका छन् । ब्याजदरका कारण वाणिज्य बैंकमा घर राखेर १० प्रतिशतमा ऋण लिने अनि सहकारीमा १८ प्रतिशतमा निक्षेप राखेको पनि हामीले भेट्यौं । पछि सहकारी संस्था डुबेपछि पैसा फिर्ता भएन, बैंकले घर लिलामी ग¥यो ।
सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न अभियानका संघहरूको भूमिका कस्तो पाउनुभयो ?
सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्न जिल्लादेखि राष्ट्रिय स्तरका विषयगत संघहरू खुलेका छन् । त्यस्ता संघमा राजनीतिक पार्टीगत रूपमा नेतृत्व बाँडफाँड भएको छ । उहाँहरूको उद्देश्य जतिसक्दो धेरै सहकारी खोल, चलाऊ र कमाऊ भन्ने छ । उहाँहरू कडा सजायको व्यवस्था गर्नु हुँदैन भन्ने लबिङमा लाग्नुहुन्छ । हामीले उहाँहरूलाई आयोगमा बोलाएर छलफल पनि गरेका थियौं । सहकारीमा यति धेरै समस्या छ, धेरै सर्वसाधारणको रकम फस्यो, तपाईंहरूले के हेर्नुभयो ?
भन्दा किन राखेको पैसा ? हामीलाई सोधेर राखेको हो र ? कुनै सहकारीको पैसा डुब्दा राज्यकै पैसा डुब्ने हो, राष्ट्रिय रूपमा सहकारीको बदनाम भयो । तर, उहाँहरूले राख्ने मान्छे फस्यो भन्नेसम्मको गैरजिम्मेवार उत्तर दिनुभयो । सर्वसाधारणलाई सहकारी सिकाउन, सहकारीका समस्याबारे सरकारलाई झकझक्याउन भन्दा पनि सहकारीको नाममा राजनीति गर्न, कमाउन, विदेश घुम्न र मोजमस्तीमै व्यस्त हुनुहुन्छ ।
सहकारी विधेयकमा स्वार्थको चलखेल भइरहेको अवस्थामा ऐन आउला भनेर कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
दलीय व्यवस्था भएकाले दलहरूबीच आन्तरिक सहमति गरेर विधेयकलाई पास गर्ने व्यवस्था छ । यो विधेयकलाई पनि दलीय रूपमा पार्टीहरूले हेर्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका पनि सहकारी विभाग छन्, उनीहरूले पनि विज्ञ राखेर कुरा गर्नुपर्छ ।
सहकारीको मूल्य–मान्यता फरक नहुने गरी ल्याउनुपर्छ । तर, हामीकहाँ पार्टीलाई सहकारीले र सहकारीले पार्टीलाई चलाएको अवस्था पनि छ । अब सुधार नगर्ने हो भने सहकारीप्रति नै सर्वसाधारणको वितृष्णा बढ्छ । त्यसैले सबै पार्टीले गम्भीर भएर विचार पु¥याउनुपर्छ । सरकारले विधेयक अघि बढाएकाले यसलाई पारित गराउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ । सबै बिचारलाई मिलाउन सरकारले पनि भूमिका खेल्नुपर्छ ।
नयाँ ऐन आएपछि सहकारीमा पैसा फसेका व्यक्तिले रकम फिर्ता पाउने अवस्था छ ?
हामीले अध्ययन गर्दा केही सहकारी संस्था ठगी गर्ने उद्देश्यले नै खुलेका पाइयो । ती संस्थाका सञ्चालकले सर्वसाधारणबाट उठाएको बचत रकम परिवार र आफन्तको नाममा लगानी गरेका पाइन्छ । यसलाई खोज्नकै लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन समिति गठनको प्रस्ताव ऐनमै गरेका हौं । न्यायिक प्रकृतिको समितिले सहकारीको रकम दुरुपयोग गर्नेको सम्पत्ति कब्जामा लिने र बिक्री गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न सक्छ ।
यसैगरी केही संस्थाको सम्पत्ति छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । सम्पत्ति पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाममा धितो बन्धक छ । यस्ता अलपत्र परेका योजनाहरूलाई समितिको निगरानीमा पूरा गर्ने, जसबाट उठेको पैसाले बैंकको ऋण तिर्ने र बाँकी रकमबाट बचतकतालाई फिर्ता गर्ने गर्न सकिन्छ । योबाहेक अरू बाटो नै छैन । यसका लागि दिलोज्यान दिएर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउँछु भनेर काम गर्ने नेतृत्वको पनि आवश्यकता छ ।